Israel gyaw Yehowa hɔ kɔsom anyame foforo (1-37)
Israel te sɛ ananafo bobe (21)
Mogya akekã n’ataade mu (34)
2 Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ: 2 “Kɔ, na kɔka gu Yerusalem asom sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Mekae ɔdɔ a na wodɔ me* wɔ wo mmabaabere mu,+Ɔdɔ a wunya maa me bere a mede m’ano too wo so sɛ mɛware wo no,+Mekae sɛnea wudii m’akyi wɔ sare no so,Asaase a wonnuaa aba wɔ so no.+ 3 Ná Israel yɛ kronkron ma Yehowa,+ ɔyɛ ne nnɔbae a edi kan a otwae.”’ ‘Obiara a ɔbɛmene no no bedi fɔ. Mmusu na ɛbɛba wɔn so,’ Yehowa na waka.”+ 4 Muntie Yehowa asɛm, O Yakob fi,Ne Israel fi mmusua nyinaa. 5 Nea Yehowa aka ni: “Bɔne bɛn na mo agyanom hui wɔ me ho,+A enti wɔtwee wɔn ho fii me ho koraa saa,A wɔakodi abosonhunu+ akyi ama wɔn nso adan nnipahunu yi?+ 6 Wɔammisa sɛ, ‘Yehowa wɔ he,Nea oyii yɛn fii Egypt asaase so+A odii yɛn anim faa sare so no,Nea ɔde yɛn faa asaasetraa so+ ne amoa mu,Nea ɔde yɛn faa asaase a nsu nni so+ na ɛso yɛ sum kabii so,Nea ɔde yɛn faa asaase a onipa biara mfaa so da,A ɔdasani biara ntenaa so da so no?’ 7 Na mede mo baa asaase a nturo ayɛ so ma so,Sɛ mummedi ɛso aba ne ɛso nneɛma pa.+ Nanso mobae no, mubeguu m’asaase no ho fĩ;M’agyapade no, modan no akyiwade.+ 8 Asɔfo no ammisa sɛ, ‘Yehowa wɔ he?’+ Wɔn a wɔkyerɛkyerɛ Mmara no nso, na wonnim me,Nguanhwɛfo no tew me so atua,+Adiyifo no hyɛɛ nkɔm wɔ Baal din mu,+Na wɔn* a wɔamfa mfaso biara ammrɛ wɔn no, wɔn na wodii wɔn akyi. 9 ‘Ɛno nti, mɛsan abɔ mo sobo bio,’+ Yehowa na waka,‘Na mo mma mma nso, mɛbɔ wɔn sobo.’ 10 ‘Mo de, muntwam nkɔ Kitimfo mpoano nsaase*+ so nkɔhwɛ. Yiw, monsoma nkɔ Kedar+ nkɔhwehwɛ mu yiye;Monkɔhwɛ sɛ biribi saa asi pɛn a. 11 Ɔman bi asesã n’anyame akɔfa nea ɛnyɛ anyame pɛn anaa? Nanso me man asesã m’anuonyam akɔfa nea mfaso biara nni so.+ 12 Momfa ahodwiriw nhwɛ eyi, mo ɔsoro;Mommɔ hu, na mo ho nwosow biribiribiri,’ Yehowa na waka, 13 ‘Efisɛ me man ayɛ bɔne abien: Me a meyɛ nkwa nsuti no, wɔagyaw me hɔ,+Na wɔakotutu wɔn ankasa mmura,*Mmura a apaapae a nsu ntumi nnyina mu.’ 14 ‘Adɛn, Israel yɛ akoa? Anaa ɔyɛ akoa a wɔwoo no wɔ ne wura fi? Ɛnde adɛn nti na nkurɔfo de no rekɔyɛ akoa yi?* 15 Agyata* a wɔn ho yɛ den bobom gu no so;+Wopow no. Wɔama n’asaase adan biribi a ɛyɛ hu. Wɔahyew ne nkurow, na obiara nte mu. 16 Nnipa a wɔwɔ Nof*+ ne Tapanes+ adidi wo tiri ho ama wo tiri ho apa. 17 Ɛnyɛ wo ara na woakɔfa eyi abɛto wo ho so?Ɛyɛ Yehowa wo Nyankopɔn a wugyaw no hɔ+Bere a ɔne wo nam ɔkwan so no nti na aba saa. 18 Enti afei, adɛn na worehwehwɛ ɔkwan a ɛkɔ Egypt+Akɔnom Sihor* mu nsu? Na adɛn nti na worehwehwɛ ɔkwan a ɛkɔ Asiria+Akɔnom Asubɔnten* no mu nsu? 19 W’amumɔyɛ bɛteɛ wo so,Na wo ara wo nkontompo akasa akyerɛ wo. Hwɛ na hu sɛ ɛyɛ bɔne, na ɛyɛ nwene paa+Sɛ wubegyaw Yehowa wo Nyankopɔn hɔ;Me ho suro biara nni wo mu,’+ Awurade Tumfo, asafo Yehowa na waka. 20 ‘Efi teteete na mibubuu wo kɔndua mu asinasin;+ Metetew ade a wɔde akyekyere wo no mu.Nanso wokae sɛ: “Merensom wo.” Na nkoko atenten nyinaa so ne nnua kusuu nyinaa ase+Na na woda si tuutuu.+ 21 Miduaa wo sɛ bobe kɔkɔɔ a eye;+ nea miduae nyinaa yɛ aba pa.Enti ɛyɛɛ dɛn na woafifi abɛyɛ bobe bɔne a minhuu bi da wɔ m’anim yi?’+ 22 ‘Na sɛ wode soda* ne samina ade ma guare mpo a,Wo bɔne rentumi mpopa mfi m’anim,’+ Awurade Tumfo Yehowa na waka. 23 Wosɔre a wuse, ‘Minguu me ho fĩ. Baal anyame nso, minkodii wɔn akyi.’ Hwɛ ɔbra a wobɔe* wɔ obon no mu. Dwen nea woayɛ no ho. Wote sɛ yomabere a ne ho yɛ hare,A otu mmirikahunu di akɔneaba wɔ n’akwan so. 24 Woayɛ sɛ sare so afurum* a onim sare so yiye,N’akɔnnɔ sɔre a,* ohuhua pɛ ɔbarima. Sɛ ne bere so sɛ wɔforo no a, hena na obetumi asiw no kwan? Wɔn a wɔrehwehwɛ no no, enhia sɛ wɔn mu biara haw ne ho. Ne bere* so a, wobehu no. 25 Hwɛ na ankɔba sɛ wo nan besisi fam,Na hwɛ wo menewa yiye na osukɔm anne wo. Nanso wokae sɛ, ‘Mfaso biara nni so!+ Daabi! Medɔ ahɔho,*+Na medi wɔn akyi.’+ 26 Sɛnea wɔkyere ɔkorɔmfo a n’ani wu no,Saa ara na Israel fi ani awu;Wɔn, wɔn ahemfo, ne wɔn mpanyimfo,Ne wɔn asɔfo ne wɔn adiyifo nyinaa ani awu.+ 27 Wɔka kyerɛ dua sɛ, ‘Me papa ne wo,’+ Na wɔka kyerɛ ɔbo sɛ, ‘Wo na wowoo me.’ Na me de, wɔn akyi na wɔdan kyerɛ me, na ɛnyɛ wɔn anim.+ Wɔkɔ amanehunu mu de a, wɔbɛka sɛ,‘Sɔre na gye yɛn!’+ 28 W’anyame a woyɛ fae no wɔ he?+ Sɛ wobetumi agye wo wɔ w’amanehunu bere mu a, ma wɔnsɔre.O Yuda, sɛnea wo nkurow dɔɔso no, saa ara na w’anyame adɔɔso.+ 29 ‘Adɛn nti na mokɔ so bɔ me sobo? Adɛn nti na mo nyinaa atew me so atua?’+ Yehowa asɛm ni. 30 Matwe mo mma aso, nanso ɛyɛ ɔkwa.+ Wɔannye nteɛso biara antom;+Mo ara mo asekan akunkum mo adiyifo+Te sɛ gyata a n’ani abere. 31 O awo ntoatoaso, munnwen Yehowa asɛm ho. Adɛn, mayɛ sɛ sare so ama Israel anaa?Anaa madan asaase a aduru sum ama Israel ho yeraw no? Adɛn nti na me man yi aka sɛ, ‘Yetumi kyinkyin sɛnea yɛpɛ. Yɛremma wo nkyɛn bio’?+ 32 Ɔbaabun werɛ betumi afi n’agude anaa?Na ayeforo werɛ betumi afi n’abɔso* a ɔde siesie ne ho n’ayeforo da anaa? Nanso me ara me man de, wɔn werɛ afi me nna pii.+ 33 O ɔbea, ɔkwan a wobɛfa so anya ɔdɔfo de, wunim yɛ oo! Woaben wo ho wɔ bɔne* mu.+ 34 Wo ntaade mpo, ahiafo* a wodi bem mogya akekã mu,+Ɛwom sɛ manhu sɛ wɔrebubu akɔ mu;Wɔn mogya akekã w’ataade mu nyinaa.+ 35 Na woka sɛ, ‘Midi bem. Migye di sɛ n’abufuw adan afi me so.’ Afei de, mede atemmu reba wo so,Efisɛ woka sɛ, ‘Menyɛɛ bɔne.’ 36 Ɔkwan a wonam so no nye. Enti adɛn na wubu no ade ketewaa bi? W’ani bewu wɔ Egypt nso ho,+Sɛnea w’ani wui wɔ Asiria ho no.+ 37 Eyi nso nti, wode wo nsa begu wo ti na woapue,+Efisɛ Yehowa apo wɔn a wode wo ho ato wɔn so no;Wɔrentumi mma ensi wo yiye.”
^ Anaa “Mekae ɔdɔ a enni huammɔ a wode dɔɔ me.”
^ Anaa “anyame.”
^ Anaa “nsupɔw.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ mmura a wotui wɔ abo mu.
^ Anaa “adɛn nti na wɔde no ama nkurɔfo, a wɔrefom no yi?”
^ Kyerɛ sɛ, Asubɔnten Nil no nkorabata bi.
^ Anaa “soda a wɔde yɛ samina.”
^ Anaa “Hwɛ wo kwan.”
^ Anaa “afurumbere.”
^ Anaa “Ne kra akɔnnɔ mu no.”
^ Nt., “Ne bosome.”
^ Anaa “ne bɛlt.”
^ Anaa “bɔne akwan.”
^ Anaa “akra ahiafo.”